SAWIRRO: Madaxweyne Cagjar oo gaaray Boorame, & ujeedada socdaalkiisa – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Madaxweyne Cagjar oo gaaray Boorame, & ujeedada socdaalkiisa
June 14, 2022 Xuseen 5
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mustafe Muxamed Cumar (Cagjar) iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boorame ee gobalka Awdal ee Somaliland.
Waftiga Madaxweyne Mustafe Cagjar ayaa waxaa kusoo dhaweeyay magaalada Boorame iyo deegaannada hoos-taga Madaxweyne kuxigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici. Si rasmi ah looma oga ujeedada socdaalka Cagjar ee deegaannada Somaliland.
SOOMAALI WEYN MAAHA SOMALILAND & SOMALIA
5-Somalia (Puntland + koonfur)
Shantaas dal ma mideeyo,calan ma mideeyo,dawlad ma miayso waxa mideeya
Guur iyo xididnimo
Ciddii sidaa wax ka duwan ku riyoonaya ma fayooba….
Abdirizzak Aliboos says:
Masha Allah weeyee .. walaala isu huran iyo hilibiyo jiidh baynu nahay.. kusoo dhoowoow dalka Somaliland!
Horta, magaca saxsan ma aha “Dowlad Degaanka Soomaalida Itoobiya” e waa Dowladda Soomaali Galbeed.
Musiibada Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku gadaaman ayaa ah inay garaadka, garashada, iyo damiirka ka suuxsanyihiin oo dhaadi kari waayeen – iska daa inay kadhiidhiyaan e – dabargoynta iyo masaxaadda ba’an ee sooyaalkooda iyo astaamaha jiritaankooda lagu hayay muddo hadda qarni ahayd.
Qaaradda hadda “Bariga Dhexe” (Middle East) looyaqaanno waxaa taariikh ahaan la oran jiray ‘The Arabian Peninsula’ mise ‘Arabia’. Waxaa magacaas beddelay dalka yaniiska ah ee Israa’iil oo markaa curdanaa, Carabina kama aysan dagaallamin e way isdhigatay.
Waxaa isla dagaalkaas lagu hayaa Soomaalida oo geyiyadooda “NFD” iyo “Dowlad Degaanka Soomaalida Itoobiya’ loogu magacdaray, iyada oo loo diiddanyahay in magac Soomaaliyeed oo rasmi ah lagu nisbeeyo.
Ma inaynu Carabta sidooda iska aqbalnaa mise waxaa waajib ah inaynu kadhiidhinno oo si adag uga dagaallanno?
Saxaafadda Soomaaliyeedse sow waajib kama saarna inay nasakhaaddan dhaxalka Soomaalida lagu sameynayo nalka ku ifiyaan oo la dagaallankeedana kaalinta ugu horreysa ka galaan?
I hate ur for hating my Somaliland but I respect u because u r a brainiac dude. NFD maxaad ugu yeedhi lahayd noo sheeg. 😉 😉
Wax caadyaal ah ayaa ama la jeclaadaa amase la nacaa saaxiib, ” Somaliland”-na waa cillan ee caadyaal ma aha.
Geyiga Soomaaliyeed ee magaca “NFD” lagu bahdilay magaciisa saxda ah waa ‘KUSSIN’ oo ah magac Soomaaliyeed oo qaddiim iyo asalba ah runtii. Waa magac salka kuhaya asalkeennii hore ee laga allifay ereyga “Cushite” maadaama waagaas “Kushin” loogu dhawaaqay jiray.
Waana magac salka kuhaya affarta jiho ee arlada mid kamid ah (South) oo hadda ‘koonfur’ qalad loogu tilmaamo. Cagsigiisuna waa KASSIN.
LET’S LEARN AND BE PROUD OF OUR SOMALI HERITAGE, INSTEAD OF ATTACKING ONE OTHER WITH DEROGATORIAL TERMINOLOGIES AND PETTY POLITICS DESIGNED BY OUR ENEMIES IN ORDER TO CAUSE OUR DOWNFALL AND SET US UPON EACH OTHER FOREVER.